निर्दोष दाबी गर्दै आईरहेकि रिया चक्रवर्तीको अन्ततः भयो यस्तो डरलाग्दो पर्दाफास! – PathivaraOnline
Home > बलिउड > निर्दोष दाबी गर्दै आईरहेकि रिया चक्रवर्तीको अन्ततः भयो यस्तो डरलाग्दो पर्दाफास!
admin October 6, 2020 बलिउड	0
एजेन्सी । बलिउडकै चर्चा कमाएर नाम स्थापित गर्दै गरेका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन के समा उनकै गर्लफेण्ड भनिएकी रिया चक्रवर्ती जे’ल जाने पक्का भएको छ । सुशान्तको ज्यान लिएको केसमा आफु निर्दोष भएको बयान दिंदै आएकी रिया चक्रवर्तीको विरुद्धमा एनसीबीले आफ्नो अनुसन्धानमा धेरै कुरा पाएको छ । सुशान्त सिंह राजपुत केसमा दिनप्रतिदिन नयाँनयाँ कुरा आईरहंदा सबैलाई अच्चमित पार्ने कुरा बाहीरिएको छ ।
मुख्य आ’रो’पी भनिएकी उनकै गर्लफ्रेण्ड रियाले सुशान्तलाई कसरी मा रि न् र सशान्तको ज्यान लिनुमा उनको संलग्नता कस्तो थियो भन्ने कुरा बाहीरिएको छ । यो कुरा अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले पत्ता लगाएको हो । भारतीय मिडिया दैनिक भास्करको रिर्पोटमा एनसीबीका एडिजी अनिल सिंह भास्करको भनाईलाई कोड गरिएको छ ।
उक्त रिर्पोटमा एनसीबीका एडिजी अनिल सिंहले सुशान्तको ज्यान लिनुमा रियाको संलग्नता भएको बताएका छन् । उनले रियालाई यो के स मा प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा अनुसन्धानमा देखिन आएको बताएका हुन् । साथै एडिजी सिंहले रियालाई सुशान्तको ज्यान मा र्नका लागी प्रयोग गरिएको हुनाले उनको भूमिका थोरै भएको पनि खुलासा गरे ।
बलिउडमा फेरि अर्की २७ बर्षिया नायिकाको निधन